Maxkamadda Racfaanka Mareykanka oo Diidday Codsi Lagu Fasaxayo Degreetadii Trump ee Dhanka Socdaalka – Goobjoog News
Maxkamadda Racfaanka Mareykanka oo Diidday Codsi Lagu Fasaxayo Degreetadii Trump ee Dhanka Socdaalka
Maxkamadda heer federaal ee racfaanka Mareykanka ayaa diidday codsi uga yimid wasaaradda cadaaladda si loo fasaxo amarkii madaxweyne Trump uu ku mamnuucay 7 dal oo Muslim ah, socdaalkooda dhanka Mareykanka.
Xukunka lagu hakiyay amarka madaxweyne Trump oo soo baxay Jimcihii ayaa isla Sabtidii wasaaradda cadaaladda Mareykanku ay racfaan ka qaadatay, si loo joojiyo dhaqan galka xukunka maxkamadda oo dhabar jab ku noqday madaxweyne Trump.
Maxkamadda racfaanka ayaa kaga jawaabtay diidmo codsigan oo dhanka xukuumadda Trump ay dooneysay in si degdeg ah loo joojiyo go’aanka maxkamadda Seattle ee lagu fasaxay socdaalka 7 dal.
Maxkamadda ayaa sugeysa faahfaahin dheeraad ah oo dhanka Washington iyo Minnesota uga imanaya Axadda, halka xukuumadda Trump- na laga sugayo faahfaahinteeda maalinimada Isniinta ah.
Go’aanka Madaxweyne Trump uu ku gaaray xanibaadda dhanka socdaalka ee 7 dal ee muslimka ah oo ay Soomaaliya ku jirto, ayaa ah mid dowladahan looga mamnuucayo iney Mareykanka u safraan muddo 90 cisho ah.
Faah Faahin: Ciidamada Dowladda Iyo Kuwa Al-shabaab Oo Ku Dagaallamay Duleedka B/weyne
Maamulka Cadaado Oo Dhaliilay Hay’adaha Daweeya Xoolaha
Pinkje myvivb canadian pharmacy cialis cialis canada
Snxnlu xpbcfy Fda approved viagra otc cialis
Jtwvmx fhfvin canada pharmacy Xvqif
Madaxweynaha DDS: ONLF Waa Dad Ka Dhiidhiyey Dhibaatooyinka Shacabkooda
purchase viagra tablets cialis online buying clomid online u...
buy generic viagra online - buy sildenafil viagra for men on...
buy viagra http://dietkannur.org/ viagra online usa...
where can i buy viagra over the counter - cheapest generic v...
online pharmacopoeia no sometime you inclination coerce how...